တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၁၈ သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံကကူညီ ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်နယ်မြေများ၌ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံက ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ ဂပြနျနိုငျငံကကူညီ ဆောငျရှကျပေး လကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ တဈနိုငျငံလုံးပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ (NCA) လကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့နယျမွမြေား၌ ဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ဂပြနျနိုငျငံက ကူညီ ဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျရေးနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျ ရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအား အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြပွဲ (Defence & Security 2017) သို့ တက်ရောက်
နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၇ Admin 0
မတ် ၂၃၊ ၂၀၂၀ Admin 0